Gabdho Wariyaal ah oo Tababar uga Furmay Magaalada baydhabo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Gabdho Wariyaal ah oo Tababar uga Furmay Magaalada baydhabo
Gabdho Wariyaal ah oo Tababar uga Furmay Magaalada baydhabo
Magaalada baydhabo ee Xaruunta Gobalka bay ayaa Maanta waxaa tababar uga furmay Wariyaal gaaraya 15 gabdhood kuwaas oo ka howlgala Warbaahinada kala duwan ee dalka .
Tababarkaan oo socon doona mudo labo maalin ah ayaa waxaa qabanaaya Media Women Network iyo IMS & FOJO . waxaana lagu baran doonaa xirfada hogaamineed .
Furitaanka Tababarka ayaa waxaa kasoo qeyb galay Mas’uuliyiin ka socday Ururka Suxufiyiinta FESOJ , Agaasimaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyi-galinta Bulshada Konfur Galbeed Somaliya
Gadoomiye ku xigeenka Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ muxuddin xasan xusni ayaa sheegay inay ka go,an tahay Tababarida iyo sare uqaasita Aqoonta Wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka wariyasha .
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyi-galinta Bulshada Konfur Galbeed Somaliya Kheyre Ali Isaaq ayaa daahfurey tababarka ka qabgalyasha ayaa ugu baaqay in xirfadii ay barteen uga faaideeyan kuwa an ka qayb galin tababarkan
Gabdhaha Wariyaash Soomaaliyeed ee ku nool Dalka kana shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo u taagan u adeegista Dalka iyo sidii ay warar saxan u gaarsiin la haayeen bulshada Soomaaliyeed inkastoo ay dhibaatooyin la kulmaan mararka qaar .